Huawei - onye na - ebubata 5G na Russia | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Ihe na 03.11.2019 03.11.2019
Huawei bụ onye na - ebubata 5G na Russia
Okwu metụtara agha azụmaahịa dị n'etiti China na United States, ebe Huawei nọ n'etiti etiti arụmụka a, nwere oge ụfọdụ na-atọ ụtọ. Russia kpebiri na ndị China ga-abụ onye na-ebubata akụrụngwa 5G.
Russia enweela mmekọrịta dị mma na Huawei ruo oge ụfọdụ, ya mere ọ bụghị ihe ijuanya na ụlọ ọrụ China ga-emepụta Netwọ 5G. Ya mere, Huawei ghọrọ onye ndu teknụzụ 5G n'ahịa Russia. Companylọ ọrụ ahụ emepelarị mpaghara ule mbụ 5G na Moscow n'ọnwa a.
Nke a bụ ozi ọma n'ezie maka Huawei, ebe Russia na-ezube ịmepụta njikọ 2024G na isi obodo niile ka ọ na-erule 5. Zhao Lei si Huawei kwuru na ụlọ ọrụ ahụ na Rọshịa na-akwado Russia kemgbe afọ iri abụọ na abụọ na mmekọrịta a na-etolite. Ọzọkwa, Huawei echeworị banyere ịzụlite ọkọlọtọ 22G.
Ihe na nke technology
Tinye a comment Отменить ответ
A gaghị ebipụta adreesị email gị. Обязательные поля помечены *
Ajuju 21 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,325.